(၂၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၃၆၆၈) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၇၀၉၅၈) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။ ၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ ၉.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၃၀.၉.၂၀၁၉)
ရက်စွဲ ။ ၃၀.၉.၂၀၁၉
၁ ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၂၀၀ ၁၀၂၀၀ - ၁၁၇၀၀ ၁၁၆၇၉ ၂၁ ၁၆၆၀၀ ၁၆၅၈၃ ၁၇
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၀၀ ၉၁၉၈ ၁၀၀၂ ၁၁၆၇၉ ၉၈၂၇ ၁၈၅၂ ၁၆၅၈၃ ၁၃၀၈၂ ၃၅၀၁
၂ ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၆၈၀ ၂၂၀ ၄၄၈၀ ၃၃၂၀ ၁၁၆၀ ၇၂၂၀ ၆၆၇၃ ၅၄၇
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၈၀ ၁၂၇၁ ၃၀၉ ၃၃၂၀ ၂၉၇၆ ၃၄၄ ၆၆၇၃ ၆၁၁၃ ၅၆၀
၃ ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၅၇၀၀ ၁၅၆၅၉ ၄၁ ၁၆၁၅၀ ၁၅၈၃၄ ၃၁၆ ၁၅၆၇၀ ၁၂၄၄၂ ၃၂၂၈
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၉ ၁၃၇၇၅ ၁၈၈၄ ၁၅၈၃၄ ၁၅၂၁၂ ၆၂၂ ၁၂၄၄၂ ၁၀၉၅၈ ၁၄၈၄
၄ ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၄၉ ၁၃၂၇ ၃၂၂ ၂၀၃၀ ၁၂၅၂ ၇၇၈ ၄၄၈၀ ၃၅၀၈ ၉၇၂
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၇ ၇၃၃ ၂၉၄ ၁၂၅၂ ၁၀၁၉ ၂၃၃ ၃၅၀၈ ၃၁၈၀ ၃၂၈
၅ မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၂၁၆၅၁ ၂၁၃၇၂ ၂၇၉ ၁၁၂၃၈ ၁၀၆၂၆ ၆၁၂ ၁၈၀၄၃ ၁၆၆၀၈ ၁၄၃၅
မြို့နယ်ရုံး ၂၁၃၇၂ ၁၉၈၉၃ ၁၄၇၉ ၁၀၆၂၆ ၁၀၂၈၅ ၃၄၁ ၁၆၆၀၈ ၁၅၇၇၉ ၈၂၉
၆ ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၂၂၉၄၆ ၂၀၇၀၆ ၂၂၄၀ ၁၆၄၆၈ ၁၃၁၆၁၀ ၂၈၅၈ ၁၃၄၀၂ ၁၁၆၈၄ ၁၇၁၈
မြို့နယ်ရုံး ၂၀၇၀၆ ၂၀၂၁၂ ၄၉၄ ၁၃၆၁၀ ၁၂၅၉၅ ၁၀၁၅ ၁၁၆၈၄ ၁၀၅၄၁ ၁၁၄၃
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၈ ၈၃ ၂၈၉ ၁၈၉ ၁၀၀ ၈၅၀ ၆၆၅ ၁၈၅
၈ ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၈၁၄၈ ၁၆၂၀၅ ၁၉၄၃ ၁၄၃၀၀ ၁၃၂၁၁ ၁၀၈၉ ၁၅၂၀၀ ၁၃၂၀၀ ၂၀၀၀
မြို့နယ်ရုံး ၁၆၂၀၅ ၁၄၆၆၈ ၁၅၃၇ ၁၃၂၁၁ ၁၂၄၅၃ ၇၅၈ ၁၃၂၀၀ ၁၁၈၉၀ ၁၃၁၀
၉ ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၂၈၃ ၈၄၁၄ ၁၈၆၉ ၁၀၁၀၀ ၈၃၁၃ ၁၇၈၇ ၁၂၂၀၀ ၁၀၄၈၃ ၁၇၁၇
မြို့နယ်ရုံး ၈၄၁၄ ၇၃၁၀ ၁၁၀၄ ၈၃၁၃ ၇၇၀၅ ၆၀၈ ၁၀၄၈၃ ၉၆၃၄ ၈၄၉
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၄၀၁၄၃ ၄၀၁၂၁ ၂၂ ၅၁၂၅၀ ၅၁၂၅၀ - ၂၈၉၃၆ ၂၇၂၃၆ ၁၇၀၀
မြို့နယ်ရုံး ၄၀၁၂၁ ၃၉၃၄၄ ၇၇၇ ၅၁၂၅၀ ၅၀၅၂၄ ၇၂၆ ၂၇၂၃၆ ၂၅၃၈၂ ၁၈၅၄
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၃၂၈၀၀ ၃၂၃၅၆ ၄၄၄ ၂၁၆၄၀ ၂၀၄၅၆ ၁၁၈၄ ၃၂၄၀၀ ၃၁၁၇၂ ၁၂၂၈
မြို့နယ်ရုံး ၃၁၇၉၃ ၃၁၃၂၈ ၄၆၅ ၂၀၃၄၀ ၁၉၇၁၈ ၆၂၂ ၂၉၈၂၃ ၂၇၆၄၆ ၂၁၇၇
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၆၈၅၀ ၁၆၈၅၀ - ၁၆၆၀၀ ၁၆၅၀၂ ၉၈ ၁၇၅၀၀ ၁၇၃၈၉ ၁၁၁
မြို့နယ်ရုံး ၁၆၈၅၀ ၁၅၇၁၅ ၁၁၃၅ ၁၆၅၀၂ ၁၄၈၆၁ ၁၆၄၁ ၁၇၃၈၉ ၁၅၃၈၆ ၂၀၀၃
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၁၁၃၈၆ ၁၁၃၈၆ - ၁၃၄၉၇ ၁၃၄၉၇ - ၁၁၂၄၀ ၁၁၂၄၀ -
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၃၈၆ ၁၀၆၀၉ ၇၇၇ ၁၃၄၉၇ ၁၂၈၆၉ ၆၂၈ ၁၁၂၄၀ ၁၀၁၃၂ ၁၁၀၈
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၁၄၄၁၁ ၁၂၃၁၃ ၂၀၉၈ ၁၇၅၈၂ ၁၇၅၆၉ ၁၃ ၂၄၈၁၉ ၂၄၇၉၅ ၂၄
မြို့နယ်ရုံး ၁၂၃၁၃ ၁၁၁၉၁ ၁၁၂၂ ၁၇၅၆၉ ၁၅၆၀၂ ၁၉၆၇ ၂၄၇၉၅ ၂၂၂၇၉ ၂၅၁၆
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၉၃၅၀ ၁၇၀၀၂ ၂၃၄၈ ၅၉၄၈ ၅၆၀၉ ၃၃၉ ၅၇၅၀ ၅၄၂၄ ၃၂၆
မြို့နယ်ရုံး ၁၇၀၀၂ ၁၄၃၃၇ ၂၆၆၅ ၅၆၀၉ ၄၆၈၄ ၉၂၅ ၅၄၂၄ ၄၂၂၈ ၁၁၉၆
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၅၄၆၃ ၄၃၆၃ ၁၁၀၀ ၃၂၀၀ ၂၀၈၃ ၁၁၁၇ ၁၆၉၃၀ ၁၅၇၉၈ ၁၁၃၂
မြို့နယ်ရုံး ၂၀၆၃ ၁၆၉၅ ၃၆၈ ၁၉၃၃ ၁၉၂၁ ၁၂ ၁၅၇၂၈ ၁၄၅၇၄ ၁၁၅၄
၁ ကချင် ၉၅၀၀ ၁၁၇၀၀ ၁၆၆၀၀ ၃၇၈၀၀
၂ ကယား ၃၉၀၀ ၄၄၈၀ ၇၂၂၀ ၁၅၆၀၀
၆ ရခိုင် ၂၁၉၄၆ ၁၆၄၆၈ ၁၃၄၀၂ ၅၁၈၁၆
၈ ရှမ်း-တောင် ၁၇၁၄၈ ၁၄၃၀၀ ၁၅၂၀၀ ၄၆၆၄၈
၉ ရှမ်း-မြောက် ၉၇၈၃ ၉၆၀၀ ၁၂၀၀၀ ၃၁၃၈၃
၁၀ စစ်ကိုင်း ၃၈၁၄၃ ၅၁၂၅၀ ၂၈၉၃၆ ၁၁၈၃၂၉
၁၁ မကွေး ၃၂၈၀၀ ၂၁၆၄၀ ၃၂၄၀၀ ၈၆၈၄၀
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၆၈၅၀ ၁၆၆၀၀ ၁၇၅၀၀ ၅၀၉၅၀
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၁၁၃၈၆ ၁၃၄၉၇ ၁၁၂၄၀ ၃၆၁၂၃
၁၄ ဧရာဝတီ ၁၄၄၁၁ ၁၇၅၈၂ ၂၄၈၁၉ ၅၆၈၁၂
၁၆ နေပြည်တော် ၅၄၆၃ ၃၂၀၀ ၁၆၉၃၀ ၂၅၅၉၃
စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု) ၂၄၁၁၈၀ ၂၁၇၀၃၃ ၂၄၁၆၂၀ ၆၉၉၈၃၃
Download Link : total_30_9_19.pdf
- လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၁၂ / ၂၀၁၉-၂၀၂၀)
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စတေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joao Freitas de Camara အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ၂၃၀ ကေဗွီ ရွှေစာရံပင်မဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပင်မထိန်းချုပ်ရေးစခန်း (မန္တလေး) တို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် ဖင်လန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Ms. Nina Irmeli Vaskunlahti ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများအား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၁၄.၁၀.၂၀၁၉)
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၇.၁၀.၂၀၁၉)
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ (၁၄.၉.၂၀၁၉) မှ (၂၀.၉.၂၀၁၉) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း Pre-Bid Meeting တက်ရောက်နိုင်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၂၃.၉.၂၀၁၉)
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၂၁.၉.၂၀၁၉ရက်နေ့မှ ၂၇.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)​​​​​​​